Zekaraya 11 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Jenesis Ọpụpụ Levitikọs Ọnụ Ọgụgụ Diuterọnọmi Jọshụa Ndị Ikpe Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ndị Eze 2 Ndị Eze 1 Ihe E Mere 2 Ihe E Mere Ezra Nehemaya Esta Job Abụ Ọma Ilu Ekliziastis Abụ Sọlọmọn Aịzaya Jeremaya Abụ Ákwá Ezikiel Daniel Hosia Joel Emọs Obedaya Jona Maịka Nehọm Habakọk Zefanaya Hagaị Zekaraya Malakaị Matiu Mak Luk Jọn Ọrụ Ndịozi Ndị Rom 1 Ndị Kọrịnt 2 Ndị Kọrịnt Ndị Galeshia Ndị Efesọs Ndị Filipaị Ndị Kọlọsị 1 Ndị Tesalonaịka 2 NdịTesalonaịka 1 Timoti 2 Timoti Taịtọs Faịlimọn Ndị Hibru Jems 1 Pita 2 Pita 1 Jọn 2 Jọn 3 Jọn Jud Mkpughe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11 “Lebanọn,+ meghee ụzọ gị, ka ọkụ gbaa osisi sida gị.+ 2 Tie mkpu ákwá, gị osisi junipa, n’ihi na osisi sida adawo; n’ihi na e bibiwo osisi ndị dị ukwuu!+ Tienụ mkpu ákwá, unu oké osisi ndị dị na Beshan, n’ihi na a lawo oké ọhịa a na-apụghị ịbanye abanye n’iyi!+ 3 “Geenụ ntị! Ndị ọzụzụ atụrụ na-eti mkpu ákwá+ n’ihi na e bibiwo ebube ha.+ Geenụ ntị! Ụmụ ọdụm tojuru etoju na-ebigbọ n’ihi na e bibiwo obere ọhịa tojuru etoju nke dị n’akụkụ Jọdan.+ 4 “Nke a bụ ihe Jehova bụ́ Chineke m kwuru, ‘Zụọnụ atụrụ ndị a ga-egbu egbu,+ 5 ndị zụtara ha gburu ha,+ ọ bụ ezie na ikpe amaghị ha.+ Ndị na-ere ha ere+ na-asịkwa: “Ka Jehova bụrụ onye a gọziri agọzi. M ga-enweta akụnụba.”+ Ndị na-azụ ha enweghịkwa ọmịiko ọ bụla n’ebe ha nọ.’+ 6 “‘N’ihi na m gakwaghị enwe ọmịiko n’ebe ndị bi n’ala a nọ,’+ ka Jehova kwuru. ‘Ya mere, lee, m na-eme ka ụmụ mmadụ chọta onwe ha, onye ọ bụla n’aka mmadụ ibe ya+ nakwa n’aka eze ya;+ ha ga-egwepịakwa ala a, ọ dịghịkwa onye m ga-anapụta n’aka ha.’”+ 7 M wee zụọ atụrụ+ ndị a ga-egbu egbu,+ n’ihi unu, unu ndị na-enwe nsogbu n’ime ìgwè atụrụ ahụ.+ M wee chịrị mkpara+ abụọ. Akpọrọ m otu Ịma Mma,+ kpọọ nke ọzọ Njikọ,+ m wee zụọ ìgwè atụrụ ahụ. 8 N’ikpeazụ, m chụpụrụ ndị ọzụzụ atụrụ atọ n’otu ọnwa,+ n’ihi na mkpụrụ obi m edikwaghị ihe ha na-eme,+ mkpụrụ obi ha kpọkwara m asị. 9 M wee sị: “Agaghị m anọgide na-azụ unu dị ka atụrụ.+ Nke na-anwụ anwụ, ya nwụọ. Nke a ga-ekpochapụ ekpochapụ, ka e kpochapụ ya.+ Ndị nke fọrọ afọ, ha rie anụ ibe ha.”+ 10 M wee were mkpara m, nke bụ́ Ịma Mma,+ gbujisie,+ iji mebie ọgbụgba ndụ mụ na ndị m.+ 11 E wee mebie ya n’ụbọchị ahụ, ndị nke na-enwe nsogbu n’ime ìgwè atụrụ ahụ,+ bụ́ ndị nọ na-ele m,+ wee si otú a mara na ọ bụ ihe Jehova kwuru. 12 M wee sị ha: “Ọ bụrụ na ọ dị unu mma,+ kwụọnụ m ụgwọ ọrụ m; ma ọ bụrụ na ọ dịghị unu mma, unu hapụwa.” Ha wee kwụọ m ụgwọ ọrụ m, mkpụrụ ego ọlaọcha iri atọ.+ 13 Jehova wee sị m: “Wụsa ya n’ebe a na-edebe akụ̀,+ ọ bụ ọnụ ahịa dị elu m ruru n’anya ha.”+ M wee chịrị mkpụrụ ego ọlaọcha iri atọ ahụ wụsa n’ebe a na-edebe akụ̀ nke dị n’ụlọ Jehova.+ 14 M wee gbujisịa mkpara m nke abụọ, bụ́ Njikọ,+ iji mebie mmekọrịta nwanne na nwanne+ nke dị n’etiti Juda na Izrel.+ 15 Jehova wee gaa n’ihu ịsị m: “Chịrị ngwá ọrụ nke onye ọzụzụ atụrụ na-abaghị n’ihe.+ 16 N’ihi na lee, m na-eme ka e nwee onye ọzụzụ atụrụ n’ala a.+ Ọ gaghị elebara atụrụ ndị a na-egbu egbu anya.+ Ọ gaghị achọ nke dị obere, ọ gaghịkwa agwọ atụrụ ọkpụkpụ gbajiri.+ Ọ gaghịkwa enye nke ọ bụla na-eguzoli ọtọ nri, ndị nke mara abụba, ọ ga-eri anụ ha,+ ọ ga-ekpupụ atụrụ ndị ahụ akpụkpọ ụkwụ ha.+ 17 Ahụhụ ga-adịrị onye ọzụzụ atụrụ m, bụ́ onye na-enweghị uru ọ bara,+ onye na-ahapụ ìgwè atụrụ m!+ A ga-egbu ya mma agha n’ogwe aka nakwa n’anya aka nri ya. Ogwe aka ya ga-akpọnwụrịrị,+ anya aka nri ya ga-akpọrịrị.”